Aaladaha kale ee Android: Wararka, Faahfaahinta, Xanta iyo inbadan | Androidsis (Bogga 2)
Huawei Sound wuxuu yimid Spain isagoo ah walaalka ka yar Sound X
Hadal caqli-gal ah oo xoogga saaraya tayada codka Huawei Sound ee la heli karo maanta.
Realme waxay ku dhawaaqday Watch S Pro, Watch S Master Edition iyo Buds Air Pro Master Edition. Laba saacadood oo cusub iyo dhegeysi cusub.
New Snapdragon 678, Chipset loogu talagalay bartamaha-dhexe oo leh waxqabad wanaagsan
Chipset-ka 'Snapdragon 678' waa Qualcomm's mobilada cusub ee mobilada horey loogu sii daayay ee loogu talagalay mobilada dhexdhexaadka mustaqbalka.
Shaandheeyey naqshadda iyo qayb ka mid ah astaamaha Samsung Galaxy Buds Pro
Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta koowaad ee Samsung Galaxy Buds Pro, marka lagu daro naqshada rasmiga ah ee qalabkan.
Echo Buds ayaa hada la socon doonta dhaqdhaqaaqa jirkaaga
Echo Buds waa sameecadaha taleefannada gacanta ee ka yimaada Amazon, kuwaas oo u muuqda inay la jaan qaadi karaan Alexa. Oo iska jir, waxa ...
Kaaliyaha Google wuxuu ka shaqeyn doonaa Samsung Smart TV dhamaadka bishan
Oo ay la socdaan Alexa iyo Bixby, waxaad lahaan doontaa Kaaliyaha Google oo ah kaaliyaha saddexaad ee muranku ka jiro Samsung Smart TV.
Qeexitaannada Nokia C1 Plus, dhammaadka-cusub ee Nokia
Faahfaahinta soo socota ee dhamaadka-dhamaadka terminalka Nokia ee timaadda si loo beddelo Nokia C1 ayaa la dusiyay
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Xiaomi Mi Box 4S Pro, Sanduuqa cusub ee TV-ga Android ee leh taageerada 8K, HDMI 2.1 iyo qiimaha fadeexada
Qalabka "Halloween" ee casrigaaga
Halloween waa maalin la tilmaamay oo argagax iyo cabsi leh, maxaa diidaya inaad shakhsi ka dhigato taleefankaaga ama aad u hesho qalab siyaado ah oo dheeri ah
Nokia waa mar labaad shirkadda ugu kalsoonida badan markay timaado helitaanka cusboonaysiinta
Warbixin cusub ayaa xaqiijisay in Nokia ay tahay shirkadda soo saarta waxyaabaha ugu badan ee lagu cusbooneysiiyo taleefannadooda gacanta. Iyo layaab Samsung!
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa nooc hoos udhacay oo ah afhayeenka smart
Sawirro isdaba-joog ah ayaa la daadiyay oo muujinaya naqshadda Huawei Sound, af-hayeenka cusub ee caqliga badan oo lala soo bandhigi doono Mate 40.
Apple wuxuu soo bandhigayaa noocyada cusub ee iPhone 12 oo ka kooban 4 nooc
Xadka cusub ee iPhone 12 ayaa horeyba u ahaa mid rasmi ah, nooc cusub oo ka kooban 4 terminaal, dhammaantoodna leh xiriir 5G
Ku balaadhi xusuusta taleefankaaga 256GB microSD oo leh qiimo dhimis dhan 57%
Qaado fursad aad ku iibsato this 256 GB micro SD raqiis ah iyada oo ay ugu wacan tahay 57% dhimis ah Maalinta Amazon Prime Day 2020. Cutubyo xaddidan!
Sameecadani wuxuu ku habboon yahay calaacasha gacantaada, waa biyo-diid, kharashkiisuna waa ka yar yahay € 12 maalintii ugu horreysay
Ka faa'iideyso Maalinta Koowaad ee 2020 si aad ugu iibsato af-hayeenkan yar ee aan biyuhu xirneyn oo wata kiishad qaadasho. In ka yar 12 euro!
Sidoo kale waa headphones-ka cusub ee Xiaomi Mi Air 2 Pro oo leh buuq baajin
Soo saaraha Aasiya ayaa naga yaabiyey Xiaomi Mi Air 2 Pro, dhagaha dhagaha cusub ee TWS oo leh buuq baajin iyo batteri ka fiican.
Amazon Echo Dot + 6 bilood oo ah Amazon Music Unlimited oo ah 19,99 euro iyo dalabyo badan oo Amazon Prime Day ah
Haddii aad raadineyso raqiis ah Amazon Echo Dot, inta lagu guda jiro maalinta Amazon's Prime Day, waxaad ku heli kartaa kaliya 19,99 euro
Galaxy Buds Sound, faahfaahinta ugu horreysa ee sameecadaha dhegaha ee Samsung soo socda
Waxaa la xaqiijiyay in Samsung ay ka shaqeyneyso samaacado la yiraahdo Galaxy Buds Sound oo ay damacsan yihiin inay ka hortagaan Apple's AirPods Pro
Ma waxaad raadineysaa raqiis sameeyaha Bluetooth oo aad u aadeyso xeebta ama meel kale oo fasax ah? Ha moogaanin dalabkan Amazon
Waxaan isbarbardhigeynaa Pixel 4a cusub oo leh kuwa ugu badan ee kula tartamaya wax kayar 500 euro
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo sanadkan la soo saaray oo ka yar 500 euro, waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato isbarbardhiga aan sameynay.
Soo saaraha Mareykanka ayaa hadda ka bilaabay Spain Motorola VerveBuds 800, sameecadaha dhagaha ee dhabta ah si ay ula tartamaan AirPods Pro
Ku ilaali gurigaaga kamaraddan Xiaomi oo leh qiimo dhimis dhan 53%
Ha moogaanin gorgortan si aad u iibsato Kamaradda Xiaomi Yi Cam oo aad u ilaaliso gurigaaga wax aad uga yar intaad u malaynayso. Waxaa lagu iibinayaa qiimo dhimis dhan 53%.
Tani waxay noqon doontaa qiimaha Galaxy Buds Live, oo ay xafiiltamaan AirPods Pro
Qiimaha Galaxy Buds Live, samaacadaha soo socda ee Samsung ee soo socda ayaa baajiyay si uu ula tartamo Apple's AirPods Pro
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Xiaomi Mi Band 4C gudaha Spain wax ka yar 20 euro!
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta bilowga Xiaomi Mi Band 4C ilaa Spain. Jijimad aad u jaban oo aad ku iibsan karto kaliya € 19,99
Xiaomi Redmi Airdots 2 waa rasmi: qiimaha la hagaajiyay iyo dhawaqa fadeexada
Dhowr bilood ka hor waxaan kuu sheegnay qaar ka mid ah sameecadaha dhagaha ee cusub ee 'Xiaomi' oo suuqa ku dhacay si ay u noqdaan beddelaad kale oo jaban ...
Pixel Buds Google ayaa hadda laga heli karaa Spain
Waxay ku dhowaad qaadatay muddo sanad ah Google Pixel Buds inay ugu dambeyntii ku degto Spain qiimo dhan 199 euro oo kaliya cad.
13-ka Luulyo, Google waxay ku dhawaaqi doontaa afhayeenka cusub ee casriga ah
Haddii aan ka hadalno kuwa ku hadla caqliga, waa inaan ka hadalnaa Amazon, boqorka aan muranka lahayn ee suuqa maanta mahad ...
Xiaomi OLED Smart TV waxaa lagu sifeeyaa saacado gudahood marka la soo bandhigo
Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta ugu horreysa ee telefishanka cusub ee Xiaomi saacado gudahood markii la soo bandhigo. OLED Smart TV oo kaa yaabi doona.
Sifeeyay qiimaha rasmiga ah ee Xiaomi Mi Band 5
Dhowr toddobaad ka hor, soo saaraha Aasiya ayaa soo bandhigay jijimadiisa waxqabadka cusub. Haa, Xiaomi Mi Band 5 horeyba waa ...
Qaado fursad aad ku iibsato Mi Band 4 wax ka yar 26 euro
U orod si aad u iibsato Xiaomi Mi Band 4 oo ka raqiisan sidii hore abid dalabkan Amazon si aad uga hesho qiimaha iibka ugu fiican Amazon.
Google Pixel 4a wuxuu marayaa FCC isagoo xaqiijinaya bilaabista dhow
Markaad dhaafto shahaadada FCC, maalmaha ka harsan ilaa iyo bilowga Pixel 4a waxaa lagu tirin karaa faraha hal gacan.
Realme C11 ayaa gabi ahaanba la sifeeyay kahor soo bandhigkeeda dhow
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Realme C11, taleefanka casriga ee xiga ee soo saaraha Aasiya oo si dhakhso leh loo soo bandhigi doono.
Xiaomi Mi TV Stick, oo la tartamaya Chromecast, ayaa gebi ahaanba lagu sifeeyay AliExpress
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Xiaomi Mi TV Stick, Xiaomi dongle si uu ula tartamo Chromecast taasna suuqa ayey imaan doontaa dhowaan.
Xiaomi Mi Band 5 ayaa imaan doona Spain iyadoo la socon doonta saacadaha Mi Watch
Warbixinno cusub ayaa xaqiijinaya in Xiaomi Mi Band 5 ay la imaan doonaan jiilka cusub ee Xiaomi Mi Watch watts smart.
Xiaomi Mi Band 5 hadda waa rasmi, oo leh shaashad dheeri ah iyo magnetic
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Xiaomi Mi Band 5, jijin firfircoon oo cusub oo ka timid soo saaraha Aasiya oo yimid iyadoo lagu rakibayo warar.
Tani waxay noqon doontaa qiimaha Xiaomi Mi Band 5
Dhowr saacadood ka dib soo bandhigideeda rasmiga ah, qiimaha kooxda Xiaomi Mi Band 5 ay noqon laheyd mid si qarsoodi ah loo soo daadiyay.
Xiaomi Mi Band 5, warkee ayuu keenayaa marka loo eego kii ka horreeyay?
Waxaan kuu soo qaadaneynaa dhammaan wararka la imaan doona Xiaomi Mi Band 5 si isbeddel loogu sameeyo kii ka horreeyay: nidaamka lacag-bixinta cusub, shaashad dheeri ah ...
Qaado fursad aad ku iibsato microSD 128 GB, 56% ka raqiisan!
Ha moogaanin gorgortan si aad u iibsato kaarka 128 SanDisk Extreme micro SD oo keydso boqolkiiba 56 si aad ugu hesho qiimaha ugu fiican.
Nokia Smart TV 43 ayaa lagu dhawaaqay: TV cusub oo 4K ah oo wata TV-ga Android
Nokia Smart TV 43 waa TV-ga cusub ee 4K soo saaraha ah wuxuuna bilaabi doonaa maalmo yar gudahood iyada oo qaab aad u muhiim ah loo qaabeyn doono.
Mi Band 5 wuxuu isticmaali doonaa isla xeedho sida Mi Band 2 iyo 3
Dareerkii ugu dambeeyay ee la xiriiray Mi Band 5 wuxuu tilmaamayaa in nidaamka lacag-bixinta uu mar kale la mid noqon doono jiilkii labaad iyo saddexaad.
Google Pixel 4a oo muddo dheer la sugayay ayaa suuqa soo gali doonta bisha Juun
Xanta ugu dambeysay ee la xiriirta Google Pixel 4a waxay soo jeedineysaa in la bilaabi doono bisha Juun.
Qualcomm wuxuu soo bandhigayaa Charge Quick Charge 3 + tiknoolajiyad degdeg ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee leh Snapdragon 765 chipsets
Technologies 'Qualcomm Technologies' waxay soo bandhigtay lacag-siinta degdegga ah ee '3 Charge XNUMX+' oo ah tiknoolajiyad degdeg ah, oo ah kii ugu dambeeyay ee lagu soo dallaco qoyska.
Qalabka ugu fiican ee hadiyadaha maalinta hooyo
Weli ma garanaysid waxaad hooyadaa siinayso 5ta May? Maanta waxaan ku siineynaa fiilo aad ku siineyso qaar ka mid ah aaladaha asalka iyo xiisaha leh ee aad ku guuleysan karto
Pixel Buds 2 ee Google ayaa suuqa soo gali doona inta udhaxeysa dabayaaqada Abriil iyo horaanta bisha May
Jiilka labaad ee Galaxy Buds 2 wuxuu umuuqdaa mid horey loo qorsheeyay in labilaabo, oo loo qorsheeyay dabayaaqada Abriil horraanta bisha May.
Dhammaan qeexitaannada Pixel Buds 2 waa la sifeeyaa ka dib markii ay u muuqdeen iibinta websaydh
Mar labaad, Pixel Buds 2 ayaa ka soo muuqday bog internet ah, qiimahiisu yahay $ 179, oo lagu daray canshuuraha, iyo halka lagu muujiyo dhammaan tilmaamaha.
Xiaomi Mi Airdots 2s waa la soo bandhigay: sameecadaha dhagaha ee cusub oo leh ismaamul 24 saacadood ah
Shirkadda Xiaomi ayaa si rasmi ah usoo bandhigtay sameecadaha dhagaha Mi Airdots 2s. Waxay u yimaadaan inay la tartamaan Airpods si toos ah.
Kooxda Redmi Band ayaa imaaneysa maanta waxayna ku sameyn doontaa midabyo kala duwan
Redmi ayaa ku sharraxeysa qaybta bandhiga casriga leh Band, oo ah sharad si rasmi ah maanta loogu soo bandhigi doono Shiinaha.
Xiaomi Mi Band 5 ayaa imaan kara xafladda Mi Fan
Maalmo yar gudahood oo ay Xiaomi la qaadan doonto masraxa Mi Festifaalka, waxay u badan tahay inaan sidoo kale arki doonno Mi Band cusub 5
Xiaomi Mi TV 4S 65 ″ wuxuu imaan doonaa Spain bisha Juun isagoo wata 4K iyo Android 9 Pie
Xiaomi marka lagu daro seddex telefoon oo cusub ayaa ku dhawaaqay 65-inch 4K TV oo leh qiimo aad u soo jiidasho leh. Ogow dhammaan tilmaamaha.
Redmi Touch Screen Speaker 8, oo ah afhayeen cusub oo caqli badan oo u ogolaanaya wicitaanada fiidiyaha
Redmi waxay ku dhawaaqday inay bilaawday Taleefoonka Taabashada Taabashada 8, kuhadal sameeye caqli badan oo leh astaamo waaweyn iyo shaashad weyn.
Redmi wuxuu ku dhawaaqay Smart TV MAX, TV 98-inch ah oo wata PatchWall
Redmi wuxuu ku dhawaaqayaa Smart TV MAX, telefishan weyn oo wata softiweerka Patchwall oo marka hore gaari doona suuqa Aasiya.
Maxaan ka ognahay Realme Fitness Band, oo ah tartanka xiga ee Xiaomi Mi Band 4
Waa qarsoodi furan in Realme ay suuqa ku soo gashay inay noqoto bedel fiican Xiaomi. The…
Sanduuqa TV-ga ee ugu wanaagsan ee la bixiyo xilliga Kirismaska ​​iyo inay ku yimaadaan waqtigiisa !!
Waxaan horeyba u joognaa Kirismaska, waana sababta aan u go'aansaday inaan abuuro qoraalkan oo aan kugula talinayo Sanduuqa TV-ga ugu fiican ee la bixiyo xilliga Kirismaska.
Sawirka koowaad ee Samsung Galaxy Home Mini, afhayeenka caqliga badan ee Samsung
Dhowr bilood oo xan ah kadib, waxaan aakhirkii helnay sawirradii ugu horreeyay ee afhayeenka cusub ee caqliga badan ee shirkadda Kuuriya: Samsung Galaxy Home Mini
(SWEEPSTAKES) Asalka HS-3: Sameecadaha dhagaha badan ee suuqa yaala
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sameecadaha dhagaha ee 'Origem HS-3' oo wata HDR, madax-bannaanid aad u weyn iyo naqshad u oggolaanaysa iyaga inay si fudud ula wadaagaan dhammaan isticmaalayaasha.
Gorgortanka: Qaado mootada Xiaomi M365 PRO qiimaha ugu fiican
Ka ogow dhiirrigelintan DHGate halkaasoo aad si ku-meelgaar ah uga iibsan karto Xiaomi Electric Scooter M365 Pro qiimaha ugu fiican.
Android TV 10 ayaa imaan kara dabayaaqada sanadkan
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka si rasmi ah loogu soo bandhigo Android TV 10 ka hor dhamaadka sanadka sida ay ku warbixiyeen warbaahin kala duwan.
Dib-u-eegista Fiidiyowga 'SUDIO TOLV', sameecadaha dhegaha la 'oo leh madax-bannaanida 35 Hrs !!
Dib u eegista fiidiyowga ee Isbaanishka ee SUDIO TOLV, samaacadaha dhegaha ee bilaashka ah ee qiimaha leh taas oo ay mudan tahay in la muujiyo madax-bannaanideeda cajiibka ah ee 35 saacadood.
ANNKE 1080P dib u eegis kamarad
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno kamaradda ANNKE 1080P wifi, teknolojiyadda raadraaca smart, aragtida habeenkii iyo tayada wax lagu qoro oo aad u yar.
Qalabka Apple ee A13 Bionic ayaa ka dheereeya Snapdragon 855 Plus, Kirin 980 iyo Exynos 9825, sida laga soo xigtay Geekbench
Geekbench wuxuu iPhone 11 ka diiwaan galiyay processor-ka A13 Bionic oo ku yaal madal tijaabo ah. Waxay ka fiicantahay Snapdragon 855 Plus, Exynos 9825, iyo Kirin 980.
Xiaomi oo ah nooca ugu dhakhsaha badan ee sii kordhaya berriga samaacadaha
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan kororka iibka Xiaomi ee ku saabsan aaladda dhageysiga ee sii wadaya inay horumar wanaagsan ka sameyso suuqan gaarka ah.
Naqshadeynta Google Nest Mini oo leh taageero lagu dhejiyo darbiga iyo xarka 3,5 mm waa la xaqiijiyay
Jiilka labaad ee Google Home Mini waxaa ku jiri doona darbi jiingad iyo jaakad 3,5 mm ah oo ah sheekada ugu weyn.
TV-yada loo yaqaan 'Shield TVs' waxay la kulmayaan cillad marka ay timaado in lagu ciyaaro 4K waxyaabaha gudaha, dhibaatada Nvidia ay aqoonsatay.
Huawei wuxuu ku soo bandhigi doonaa FreeBuds cusub IFA 2019
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo bandhigida ay Huawei ku fulin doonto IFA 2019 ee jiilka cusub ee FreeBuds-keeda sida ay horeyba u shaaciyeen.
IPhone-yada cusub ayaa la soo bandhigayaa 10-ka Sebtember
10-ka Sebtember, Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa sagaalka jiil ee iPhone-ka ee sannadkan, oo sheekadooda ugu weyn ay noqon doonto tirada kamaradaha gadaal.
Redmi waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa telefishankeedii ugu horreeyay
Raadi wax walba oo ku saabsan TV-ga Redmi Smart ee ugu horreeya oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Shiinaha oo aan horay u ogaanay wax walba.
Mixcder E7, sameecadaha dhagaha ee moodada ah oo qiimo dhimis lagu sameeyay
Qalabka dhageysiga ee loo yaqaan 'Mixcder E7' waxay leeyihiin tiknoolajiyaddii ugu dambeysay iyo naqshad gaar ah, haddana waxay sidoo kale ku jiraan dalab aad u sarreeya. Ha u oggolaan inay baxsadaan!
Google wuxuu ka shaqeynayaa jiilka labaad ee Google Mini
Jiilka labaad ee Google Mini, ayaa arki kara iftiinka bisha Oktoobar ee sanadkan, waana kuwan wararka ay na siin doonto.
Huawei wuxuu ku shaqeyn karaa Moto Mods u gaar ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha Huawei ee ah inay ku soo bandhigaan Moto Mods u gaar ah suuqa qaab kiisaska leh astaamo caqli badan.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee OnePlus Smart TV
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya ee durba laga sii daayay wax ku saabsan OnePlus Smart TV ee la bilaabi doono deyrta.
OnePlus Smart TV ayaa suuqa soo gali doona dayrtan
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka OnePlus Smart TV ee sumaddu xaqiijisay inuu si rasmi ah u imaan doono bisha Sebtember.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigga rasmiga ah ee TV-ga Redmi Smart ee ugu horreeya oo horayba si rasmi ah loogu xaqiijiyay astaanta.
OnePlus wuxuu diyaariyaa ilaa 4 telefishan oo leh TV-ga Android
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha 'OnePlus' ee ah inay afar telefishan ka furaan TV-ga Android oo ah nidaamka hawlgalka ee ay hadda horumarinayaan.
Alcatel 3088 4G: Taleefan cusub oo leh KaiOS
Ka raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan Alcatel 3088 4G, taleefanka cusub ee fudud ee shirkadda u adeegsanaya KaiOS inuu yahay nidaamkeeda hawlgalka horayna si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay.
Mediatek waxay bilaabi doontaa wax soo saar ballaaran oo ka kooban 5G chipset-ka rubuca koowaad ee 2020
Mediatek waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto wax soo saar balaaran oo ka kooban 5G chipset-ka rubaca koowaad ee sanadka 2020 iyo ganacsigeeda wareega seddexaad.
Mediatek Helio G90 processor-ka ciyaarta wuxuu horey u lahaa taariikh la sii daayo
Mediatek Helio G90 waa Chipset-ka ciyaaraha casriga ee soo socda ee horey u lahaa taariikh rasmi ah oo la sii daayo.
Nokia 105 iyo Nokia 220 4G: Taleefoonnada fudud ee cusub ee summaddu leedahay
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Nokia 105 iyo Nokia 220 4G, oo ah laba taleefan oo fudud oo nooc ah oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
New Qualcomm Snapdragon 215: xadka gelitaanka wuxuu leeyahay ikhtiyaar cusub oo laga kala xusho
Qualcomm's Snapdragon 215 platform-ka moobiilku hadda waa rasmi. Tan waxaa loogu talagalay kaladuwanaanta hoose waxaana loo soo bandhigey sidii cusbooneysiin SD212 ah.
Ka iibso samaacadaha wireless-ka ah Gearbest
Haddii aadan weli iibsan headset wireless ah, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho Gearbest oo ah qiimo waali ah. Hadda cudurdaar ma jiro.
Laga soo bilaabo Oppo waxay ku andacoonayaan in kaamirooyinka shaashadda ka hooseeya ay waddo dheer u socdaan
In kasta oo aysan sir qarsoon ahayn in teknolojiyadda lagu siinayo kamaradaha shaashadda ay weli cagaar tahay, haddana ragga Oppo wali way ka shaqeynayaan.
Google ayaa ka daashay wararka xanta ah ee sheegaya in Google Home uu magaceeda u badali karo Nest Home wuxuuna xaqiijiyay inuu ku sii socon doono magaca asalka
Ogeysiis deg deg ah! Xiaomi waxay ku dhawaaqday bixitaanka Mi Electric Scooter (M365)
Ogeysiis deg deg ah! Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa dib u soo celinta Mi Electric Scooter (M365). Ogow wax badan oo ku saabsan ka noqoshada mootada korantada ee sumadda.
Xiaomi Mi Band 4 ayaa si dhuumaaleysi ah ugu soo galaysa Aliexpress isagoo xaqiijinaya qiimaha iyo naqshadeynta
Iyada oo loo marayo dukaanka caanka ah ee Alliexpress waxaan ku xaqiijin karnaa naqshadeynta iyo qiimaha ugu dambeeya ee ay yeelan doonaan Xiaomi Mi Band 4. Ma u qalantaa iibsigaaga?
Google Nest Hub ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Google Nest Hub ee Spain si rasmi ah sida horayba loo xaqiijiyay iyo qiimaha ay ku iibineyso.
Google Pixel 4 wuxuu macsalaameyn doonaa looxyada iyo qormooyinka
Naqshadeynta Google Pixel 4 ayaa lagu sii deyn lahaa iyada oo loo marayo sawirka dhiirrigelinta ee shaashadda ilaaliyaha jiilka afraad ee Pixel
Bandhigga 'Amazon Echo Show 5' wuxuu ku imaanayaa Spain iyadoo la siinayo dalab cajiib ah
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Amazon Echo Show 5, afhayeenka shaashadda Amazon ee dhowaan yimaada Spain waadna ku qaadan kartaa qiimo dhimis weyn.
TSMC waxay bilaabeysaa wax soo saar balaaran jiilka 7aad XNUMXnm + chip
TSMC, soosaarayaasha Chipset-ka Taiwan, ayaa ku dhawaaqay inay bilaabeen wax soo saar ballaaran oo jiilka labaad ee 7nm + ah.
[VIDEO] 11ka khiyaano ee ugufiican ee lagu hanan karo Samsung's Galaxy Buds
11-kan tabaha ee loo yaqaan 'Galaxy Buds' waxaad awoodi doontaa inaad hagaajiso codka, aad si fiican u waafajiso, aad u qaabeyso badhamada taabashada oo aad kor u aqriso fariimaha oo dhan.
The OnePlus Bullets Wireless 2 headphones waxay yimaadaan 10 saacadood 10 daqiiqo oo lacag ah
Qaar ka mid ah Rasaasta Wireless 2 headphones in, in kastoo aysan gebi ahaanba wireless ahayn, waxay soo bandhigaan waxa ugu fiican ee sumaddan lagu magacaabo OnePlus.
Guriga Samsung ee Galaxy Home horey ayuu u haystay taariikh sii deyn ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taariikhda la bilaabayo Galaxy Home, oo ah afhayeenka ugu horreeya ee caqli badan ee Samsung ee garaaca dukaamada hadda.
Waxaa si habsami leh loo soo saaray qalabkii ugu horeeyay ee shaashada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada LCD
Shirkadda 'Fortsense' ayaa ku dhawaaqday inay si guul leh u soo saartay aaladda sawir-qaadista ee muuqaalka faraha ee looxyada LCD. Tani waa horumar!
Gadgetbridge, oo ah isha furan ee ka bedesha Pebble, Mi Band iyo barnaamijyo badan
Haddii aad haysato mid ka mid ah dharka la xiran karo ee la jaan qaadi kara Gadgetbridge, waad beddeli kartaa barnaamijyadooda rasmiga ah oo markaa waad madaxbannaan tahay.
Qalabka ugu wanaagsan ee la bixiyo Maalinta Jacaylka
Maanta waxaan kuu soo jeedineynaa shanta ikhtiyaar ee ugu fiican ee aad ku heli karto hadiyadda ugu farsamada badan ee Jacaylka, la yaab lamaanahaaga qalab casri ah oo loo yaqaan 'gadjet'
Samsung's Galaxy Buds Earbuds Wireless Earbuds ayaa Goor dhow Soo Socda
Wax walba waxay muujinayaan in dusha sare ee noocyada Samsung ay arki doonaan nalka oo leh qalab aad loo filayo, qalabka dhegaha ee Galaxy Buds
Sida loo abuuro tuubbooyinka Windows 10 sida WebApps
Codsi caan ah waxaan kaaga tagayaa cashar fiidiyow ah oo wax ku ool ah kaas oo aan ku bari doono sida loo abuuro WebApps-ka Windows 10 ...
Waxaan falanqeyneynaa sameecadaha dhagaha ee 'Mixcder E9': qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta suuqa yaal
Isu diyaari waayo-aragnimo weyn oo maqal ah oo loo yaqaan 'Mixcder E9' iyada oo ay ugu mahadcelineyso joojinta Firfircoon ee Buuqdeeda ee sameecadaha dhegaha badan ee Bluetooth.
Intel, MediaTek iyo Qualcomm waa shirkadaha ugu badan ee diyaar u ah inay siiyaan 5G IP, shatiyadaha iyo moobiladaha moobiillada shirkadaha soo saara taleefannada.
Nokia 5 (2017) wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie
Terminal-kii ugu dambeeyay ee shirkadda Nokia ee ku dhawaaqay cusbooneysiinta Android Pie waa Nokia 5 (2017), terminal ku dhow inuu u dabaaldego 2 sano suuqa.
Sida looga furo qalabkaaga Smart Life
Casharro fiidiyow ah oo ficil ah oo aan ku sharraxayo sida looga furo aaladda Smart Life. Xaq u leh fiilooyinka casriga ah, nalalka iwm, iwm.
Codsiyada ugufiican ee looga faa'iideysto Chromecast
Soo ogow xulkan afarta barnaamij ee Android ee aad uga faa'iideysan karto Chromecast ee TV-gaaga qaab fudud.
Xiaomi waxay gaadhay 100 milyan oo bangiyo koronto iib ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka bangiyada awoodda ee Xiaomi adduunka oo dhan oo guul weyn u ah sumadda Shiinaha.
AnTuTu waxay tijaabisay waxqabadka processor-ka Snapdragon 675. Dhibcaha Chipset-kan ayaa ka sarreeyay kan Snapdragon 710 iyo 670!
Google wuxuu dhaafayaa Chromecast Audio wuxuuna joojiyaa sameynta
Chromecast Audio waa badeecad ku hadhay suuq u gaar ah sidaas awgeedna Google wuxuu joojiyay soo saariddiisa weligiis iyo weligiis.
Google ayaa ku soo rogi doonta shuruudo TV-ga Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan shuruudaha ay Google rabto inay ku soo rogto soo saarayaasha TV-ga Android si ay u siiyaan khibrad adeegsade ugu fiican
Toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida ugu badan ee terminaallada ay shirkadda Finnishku hadda ku leedahay ...
Dib u eegis sameecadaha dhagaha lagu xiro Arbily T8
Waxaan u soo bandhigeynaa qalabka wax lagu dhageysto ee loo yaqaan 'ARBILY T8 headphones', tayada codka, naqshad soo jiidasho leh iyo batari 3.000 mAh ah oo aad xitaa ka qaadan karto mobiilka
Muraayad la socota Android iyo Kaaliyaha Google ayaa looga dhawaaqay CES 2019
Ka ogow wax badan oo ku saabsan muraayaddan oo leh Android nidaamkeeda hawlgalka isla markaana la jaan qaada barnaamijyada nidaamka hawlgalka ee lagu soo bandhigay CES 2019.
Xiaomi Mi Air Dots Pro: sameecadaha dhagaha ee cusub
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Xiaomi Mi Air Dots Pro, sameecadaha dhegaha cusub ee wireless-ka ah ee nooca Shiinaha, ayaa horay si rasmi ah loo soo bandhigay
Dib u eegis YI 4K + Kaamiradda Waxqabadka
Waxaan tijaabinay YI Technology Camera Camera, YI 4K + wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo wax gaar ah, duubista 4K ee fps 60, cajiib ah.
Fitbit Charge 3 horeyba wuxuu kuu ogolaanayaa inaad deg deg ugu jawaabto dadka isticmaala Android
Fitbit Charge 3 wuxuu helay cusbooneysiin aad kaga jawaabi karto fariimaha adoo adeegsanaya jawaabaha degdega ah.
Laptop-ka soo socda ee soo saaraha Chuwi uu qorsheynayo inuu suuqa ka soo saaro ayaa ah LapBook Pro, laptop ah oo leh shaashad shaashad ah oo la dhimay ugu badnaan
Isbarbardhiga dhagaha dhagaha ee TWS
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno 3da beddel ee shirkadda TWS ay noo soo bandhigeyso sameecadaha dhegaha leh ee buluugga ah, miyaad ka fikireysaa inaad mid iibsato?
Kani waa mootada gacanta ee Microsoft ay ku shaqeyso
Muuqaalada qaar ayaa la kashifay oo muujinaya nashqadda nin guurguura oo Microsoft ay ku shaqeyneyso taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada.
Intii lagu guda jiray soo bandhigida Huawei Mate 20 ee Shiinaha, soo saaraha Aasiya wuxuu tusay Huawei AI Speaker, afhayeenka cusub ee caqliga leh ee shirkadda Shiinaha.
Iibso hadalada ku hadla Amazon Echo oo leh qiimo dhimis fadeexad ah
Noocyada 'Amazon Echo' ee ku hadla waxaa laga bilaabay Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabida kuwa ku hadla magaca Spain si rasmi ah
Waxaan ku tijaabinay xiaomi xeedho wireless, Mi 10X Max, xeedho la jaan qaada moodooyinka ugu dambeeya suuqa oo leh muuqaal aan jecel nahay.
Dhammaan qalabka Google Pixel 3
Dhammaan agabyada rasmiga ah ee loogu talagalay Google Pixel 3. Soo ogow dhammaan qalabka aad sida ugu dhakhsaha badan ugu adeegsan karto Google Pixel 3-kaaga.
Dib u eegista mashruuca 'Excelvan BL'
Waxaan tijaabinay Excelvan BL, oo ​​ah borojektar aad uga badan, illaa cabirka shaashadda 200-inji, Android, isku xirnaan weyn, iyo kuwa ku hadla
Best Buy waxay Chromecast 3 iibineysaa ka hor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin
Haddii aad sugeysay cusboonaysiinta Chromecast, maahan inay waqti dheer ku qaadato qabashada jiilka cusub, maadaama ay ku dhowdahay inay suuqa gasho.
LG wuxuu soo bandhigayaa sameecado sameecado leh oo leh badhan loogu talagalay Kaaliyaha Google
LG wuxuu soo bandhigayaa badhan loogu talagalay Kaaliyaha Google ee sameecadaha dhagaha ee cusub. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan headphones-ka wireless ka raadso LG.
Tronsmart Element Pixie dib u eegista hadalka Bluetooth
Waxaan tijaabinay Tronsmart Element Pixie, oo kuhadla Bluetooth-ka oo bixiya naqshad daraasad leh, ismaamul farabadan iyo awood badan.
Mbuynow Taabashada TWS, sameecadaha sameecadaha ee Airpods-ka ah oo kaliya thanks 36.99 thanks iyadoo ay ugu wacan tahay 38% Qiimo dhimis aad keydisay
Mbuynow sameecadaha dhagaha, Touch TWS waa sameecado jaban oo Apple Airpods u eg oo leh tayo cod iyo awood la aqbali karo.
Mbuynow, Kameradda ugu fiican HD IP ee kaliya € 35.99 iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaheeda 40% ee aad keydisay € 24
Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso wax kasta oo ay Mbuynow IP HD Camera na siineyso maadaama aad hubaal ka afuufayso.
Google waxay soo saari doontaa sameecad caqli badan oo leh shaashad
Google waxay soo saari doontaa sameecad caqli badan oo leh shaashad sannadkan. Raadi wax badan oo ku saabsan afhayeenka cusub ee shirkadda ee imanaya deyrta.
Dib u eeg Wavefun Super X oo lagu daray 6-unug oo ah bixinta Express
Xirmada Qoyska ee YI Home Camera 2 1 Dib u eegis
Waxaan ku tijaabinay Kameradda Guriga ee '2' in-1 "xirmo qoys" oo bixisa howlo xiiso leh, qalab ku habboon in wax walba la xakameeyo.
Dib u eeg Aermoo B3 sameecadaha dhegaha
Waxaan tijaabinay samaacadaha Aermoo B3 ee cajiibka ah, falanqeyntan waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan xogta iyo khibradeena isticmaalka dhowr maalmood.
AUKEY waxay soo bandhigaysaa "had iyo jeer baytariyo mobaylka ku jirta"
Waxaan tijaabinay xirmada 'AUKEY' oo dhameystiran si batteriga taleefannadeena casriga ahi uu u adkeysan karo nooca inta lagu jiro ciidaha, hubaal in mid ka mid ah uu waxtar yeelan doono.
Waxaan kuu soo jeedineynaa xoogaa kamarado ficil ah oo jaban oo qaabka GoPro ah, laakiin aad uga jaban jeebka. Liiska waxaa la cusboonaysiiyay Janaayo 2022
BIKI waa diyaarad aan duuliye lahayn oo u eg kalluun
BIKI waa robot qaabeeya kalluunka, drone-ka biyaha hoostiisa ku jira oo leh kamarad isku dhafan oo 4K ah oo aad ku badbaadin karto xusuusta xiisahaaga biyaha
Wax yar ka badan nus sano ka hor, Bishii Sebtember ee 2016, Amazon waxay soo saartay nooc cusub oo qalabku cusbooneysiiyey ...
Meizu Band waa jijin waxqabad leh guddi OLED iyo dareeraha garaaca wadnaha
Meizu Band waa jijin waxsoosaar soo saare Shiineys ah oo raba inay wax ku adkaato Xiaomi iyada oo wadata garaacisteeda Mi Band.
Sida loogu beddelo telefishankayagii hore xarun madadaalo oo ka yar 90 euro
Maanta, in ka yar 90 Euros oo kharash ah, waxaan sharxi doonaa sida ugu wanaagsan ee loogu beddelo telefishankeenii hore xarun madadaalo ee Android.
Sudio Regent, sameecadaha dhagaha ugu sareeya ee loo yaqaan 'Beats-style headphones' ee 129 euro, hada ku hel 109 euro oo ay uga mahadcelinayaan Androidsis !!
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegista Sudio Regent, dhegeysi ku jira qaabka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Beats' oo leh teknoolojiyad wireless ah iyo ismaamul weyn.
Qasabadaha ayaa daboolaya talooyinka galoofyada si aad ula macaamili karto taleefankaaga casriga ah
Xilligan qabow, roob iyo baraf leh, Qasabadaha ayaa ah xalka ugu fiican ee kuwa maalintii qaata gacmo gashigooda.
Falanqaynta qalabka dhageysiga dhegaha ee Sudio Vasa Blá, in kabadan samaacadaha dhagaha moodada
Waxaan falanqeyneynaa Sudio Vasa Blá dhegaha dhegaha, sameecado tayo sare leh oo leh nashqadeyn heer sare ah oo ka dhigaysa qalab casri ah.
Dib-u-eegista Thieye i60 Action Camera, oo ah sawir tayo leh oo ah 'Go Pro Hero' oo kaliya 70 Euros
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Dib-u-eegista Thieye i60 Action Camera, Kaamiro ficil qiimo jaban leh oo duubista fiidiyowga ay ku socoto 4K 25 weedho halkii labaad.
Dib u eeg VR BOX 2.0, waxaan tijaabinay muraayadaha ugu Fiican Qiimaha hoose ee Virtual
Maanta waxaan kuugu lafagureynaa dib u eegistaan ​​VR BOX 2.0 maxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu fiican Qiimaha Qiimaha Jaban ee xaqiiqda dhabta ah.
Midka ugu horeeya ee aan biyuhu xirneyn ee loo yaqaan 'Android One' waa mid ka yimid Sharp waxaana lagu soo bandhigay japan
Kii ugu horreeyay ee aan biyuhu lahayn ee loo yaqaan 'Android One' waxaa lagu soo bandhigayaa Japan, oo ah terminal ay soo saartay shirkadda Sharp, Sharp 507SH oo si aad iyo aad u fiican u sawiraya
Haddii aad leedahay jijin Microsoft Band 2, waxaad horay u heli kartaa taageero buuxda oo Android ah laga bilaabo maanta marka Microsoft Health la cusbooneysiiyo.
Samsung waxay ku dhawaaqday Gear Fit 2 wearable iyo Gear Icon X sameecadaha dhagaha
Soo saaraha Kuuriya ayaa soo bandhigay Gear Fit 2, jijimadiisa cusub ee dhaqdhaqaaqa jirka, iyo Gear Icon X, oo ah taleefannada dhegaha laydhka casriga ah
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay Mi Band 2 oo leh shaashadda OLED iyo dareeraha garaaca wadnaha
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mi Band 2 qiimo isku mid ah iyo inay leedahay shaashad muujinaysa waqtiga, talaabooyinka la qaaday iyo garaaca wadnaha.
Samsung Gear Fit 2 qeexitaannada ayaa xaday
Shaandhaynta cusub ee Samsung Gear Fit 2, jijin firfircoon ee soosaaraha Kuuriya, ayaa ina hor dhigaysa qeexitaanno ku dhowaad la yaqaan.
Sidee ayuu damaanadda RHA u shaqeeyaa?
Haddii aad rabto inaad ogaato sida dammaanadda RHA u shaqeyso, ha moogaan maqaalkan dhammaystiran oo aan ku sharxeyno tillaabooyinka la raacayo haddii aad dhibaato qabto.
RHA T20, falanqeyn iyo ra'yi: samaacado dhegeysi heer sare ah oo tayo maqal leh oo u dhigma dhammeystirkiisa
Falanqeyn dhameystiran oo Isbaanish ah oo ku saabsan headphones RHA T20, samaacadaha dhagaha ee ugu fiican suuqa oo u muuqda kuwa dhameystirkooda iyo dhawaqa tayo sare leh.
Asus wuxuu soo bandhigayaa Zenbo, kaaliyeheeda gaarka ah ee robot ee gurigaaga
Asus Zenbo waa robot-ka shirkaddan oo yeelan doonta awoodo kala duwan kaaliye shakhsi ahaaneed oo ay ka soo saari doonto SDK horumariyeyaasha.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay Mi Drone oo leh noocyada 1080p iyo 4K ee duubista fiidiyowga
Labada nooc ee kala duwan ee ay soo bandhigtay Xiaomi ee Mi Drone waxay ku kala duwan yihiin tayada duubista fiidiyowga, 1080p iyo 4K.
Tani ma noqon doontaa naqshadda Samsung Gear Fit 2?
Sawirro taxane ah ayaa lasoo daadiyay oo muujinaya naqshada Samsung Gear Fit 2, oo ah nooc cusub oo jijimooyinka isboortiga soo saaraha ah
4 dhinac oo Google Home ay tahay inuu cabbiro si guul loogu gaaro
Guriga Google wuxuu imaan doonaa dhamaadka sanadka wuxuuna lahaan doonaa tartan toos ah shirkadda 'Amazon Echo'. Waxaad ubaahantahay inaad adeecdo afartaan dhinac si ay guul ugu noqoto.
Xiaomi wuxuu bilaabay Mi Bunny, smartwatch-ka GPS wuxuu diirada saaray kuwa yaryar ee guriga ku jira
Xiaomi Mi Bunny waa saacad caqli-gal ah oo leh shaqooyin dhowr ah oo gaar ah si loola socdo wax kasta oo carruurteennu sameynayaan.
Philips SpeechAir waa duubista codka smart ee ugu horeysa suuqa
Philips SpeechAir waa cod duube caqli badan oo leh hawlo aad u xiiso badan oo lagu fulinayo ficilo gaar ah sida sawir qaadista
Androidsis, bogga loogu talagalay adduunka Android inta badan booqdayaasha isticmaala iPad iyo iPhone
Marka loo eego tirakoobka gudaha ee 'Androidsis', waxaan nahay bogga ugu booqashada badan isticmaalayaasha Apple iPad iyo iPhone. Maxay noqon karaan sababaha?
Dib u eegis ku samee Isbaanishka samaacadaha isboortiga ee Beatit, samaacadaha dhegaha leh ee Bluetooth wireless 30 euro oo keliya
dib u eegis qotodheer iyo falanqeyn ku saabsan nooca Beatit headphones-ka isboortiga G18, Dhagaha dhagaha wireless-ka ee wireless-ka ah ee teknolojiyada Bluetooth 4.1 iyo batari ku dhisan lithium-ion
Sony waxay soo bandhigtay barnaamijka "Future Lab" waxayna si kadis ah u rajeyneysaa "N"
Sony waxay sii deyneysaa fiidiyoow fiidiyoow ah halkaas oo ay ku soo bandhigeyso dhar cusub oo la xiran karo oo loo yaqaan "N" waxaana lagu soo bandhigi doonaa shirka SWSW
SmartThinQ Hub waa cusub oo ka yimid LG oo ah shey caqli badan oo gurigaaga u yaal
SmartThinQ Hub waa aalad guri oo caqli badan oo kuu noqon doonta madadaalada iyo wargelintaada.
Dhegeysiga HTC Vive VR Wuxuu Helayaa Ansixinta FCC
Adoo maraya HTC VIve oo ay soo saartay FCC, oo ah aaladda xaqiiqda dhabta ah ee soosaaraha Taiwanese ah, ganacsigeeda ayaa dhowaan noqon doonta xaqiiqo weyn
UE Boom 2, waxaan ku tijaabinay kuwa ugu hadalka fiican wireless-ka suuqa
Dareenka ugu horreeya ka dib tijaabinta sameecadaha UE Boom 2, jiil cusub oo ka kooban UE sameecadaha oo u taagan iska caabbinta boodhka iyo biyaha.
Xiaomi Dhegaha Dhegaha, Dhegaha dhegaha ee Premium wax ka yar 20 euro
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegista Isbaanishka ee Dhagaha Dhagaha Dhagaha ee cusub ee 'Xiaomi', 'headphones' Premium iyo teknolojiyada dhawaaqa isku wareegsan ee ka yar 20 Euros
RHA T10, falanqaynta mid ka mid ah dhagaha dhagaha ugu fiican suuqa
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan dhageysiyada RHA T10, dhagaha dhagaha ee cusub ee RHA oo leh qiimo lacag leh
Kooxda Google Glass waxay abuureysaa dhar gashan oo aan galaas lahayn
Nooca loo yaqaan 'Google Glass prototype' wuxuu fursad u siinayaa seddex shey oo cusub, oo midkood uu noqon karo mid la gashado oo diiradda la saaro maqalka iyo cayaaraha.
Jijin waxqabad oo ka socota Samsung qiimo aad u jaban? Waa suurtagal, haa
Samsung waxay dooneysaa inay kula tartanto shirkadda X Bandomi ee loo yaqaan 'Mi Band' oo leh jijin waxqabad oo u gaar ah oo bixisa fursado badan oo qiimo jaban ah.
Soo Bandhigay jijimis cusub oo Xiaomi Mi Band 1S ah oo leh garaaca garaaca wadnaha
Daabacaadda cusub ee 'Xiaomi Mi Band 1S' jijimadda waxqabadka waxay soo bandhigeysaa isugeyn cusub oo ah muuqaal leh dareemaheeda garaaca wadnaha.
Xiaomi Mi Band 1S, wuxuu arki karaa iftiinka soo socda Nofeembar 7
Cusboonaysiinta jijimadda casriga ah ee soosaaraha Shiinaha ayaa imaan karta bisha Nofeembar iyadoo la adeegsanayo magaca Mi Band 1S, oo leh garaaca wadnaha cusub.
BlueSmart, shandadda casriga ah ee loogu talagalay Android iyo iOS ayaa halkan taal, waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahinta oo dhan.
BlueSmart waa shandada ugu horeysa ee smart ee loogu talagalay Android iyo iOS oo aad ka maamuli karto Android-kaaga ama iPhone / iPad-ka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad, sheegto waxyaabo yaab leh sida geolocation, smart smart iyo astaamo badan oo cajiib ah.
HTC Grip ma imaaneyso illaa 2016
Dhibaatada dhaqaale ee haysata HTC awgeed, kooxdeeda tirakoobka ee HTC Grip ma imaaneyso illaa bilowga sanadka soo socda ee 2016
Misfit wuxuu ku dhawaaqay Shine 2: matoor gariirka cusub, caato ah oo leh laydhadh midab leh oo LED ah
Misfit Shine 2 wuxuu awoodi doonaa inuu helo qoraalka iyo ogeysiisyada, marka laga reebo waxa u caabbinta biyaha iyo kuwa 6 bilood ee nolosha batteriga ah.
Mi TV3, Xiaomi's 4K 60-inch TV smart oo leh Android 5.1 qiimo ahaan € 690
Mi TV3 waa sharadka cusub ee Xiaomi ee Smart TV iyo in uu maanta ku dhawaaqay munaasabad uu ku soo bandhigayay sabuurad laba taayir leh.
Xiaomi Ninebot Mini, oo ah laba lugood leh oo loox leh oo loogu talagalay deegaanka magaalooyinka
Ninebot Mini waa shaashad laba-taayir leh oo ay abuurtay Xiaomi oo gaadha 2 kiiloomitir is-maamul, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon magaalooyinka.